Thutasone - News and Media
ထီပေါက်ထားတဲ့သိန်း၂ဝဝကိုမတည်ပြီး ရွှေတိဂုံ‌စေတီတော်ပုံစံတူ‌စေတီတစ်ဆူတည်သွားမယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာ့လက်ရွေးစဉ်အားကစားသမားဟောင်းဇင်မာဝမ်း
August 14, 2020 Thutasone 0
ထီပေါက်ထားတဲ့သိန်း၂ဝဝကိုမတည်ပြီး ရွှေတိဂုံ‌စေတီတော်ပုံစံတူ‌စေတီတစ်ဆူတည်သွားမယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာ့လက်ရွေးစဉ်အားကစားသမားဟောင်းဇင်မာဝမ်း ဇင်မာဝမ်းဆိုတာ တစ်ချိန်က မြန်မာ့ဘော်လုံးပရိတ်သတ်များကြားမှာ တိုက်စစ်မှာ ဇင်မာဝမ်း၊ နောက်တန်းမှာဆို အသင်းခေါင်းဆောင် စန်းစန်းမော် ဆိုပြီး ပြောစမှတ်တွင်ခဲ့ကြရတဲ့ အမျိုးသမီးဘော်လုံးကဝေတွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးဘော်လုံး ကစားသမားဟောင်း ဇင်မာဝမ်းဟာ မြို့နယ် လက်ရွေးစဉ်၊ ခရိုင်လက်ရွေးစဉ်နဲ့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်လက်ရွေးစဉ်ပွဲတွေမှာ အဆင့်ဆင့်ကစားပြီးမှ ၁၉၉၈ မှာ […]
ရှိသမျှ မိန်းကလေးအားလုံး ဆံပင်အရှည်ထားပြီး မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းတဲ့ ရွာ
ခေတ်ကာလတိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါ ပြောင်းလဲကုန်ကြပါတယ်…. မိတ်ကပ်ကြောင့် မိန်းကလေးတွေကလည်း ပိုပိုလှလာသလို..တဖက်မှာလည်း သနပ်ခါးဆိုတာပျောက်ကွယ်ကုန်ပါတယ်တချို့မိန်းကလေးတွေက ဆံပင်တွေဆေးဆိုး အတိုညှပ်ပြီး ကိုရီးယားမလေးတွေလို ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်… ဒါပေမဲ့ ခုပြောပြမယ့် ရွာက မိန်းကလေးတွေက တစ်ရွာလုံးနီးပါး မြန်မာဆန်ဆန် ဆံပင်ရှည်လေးတွေနဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းထားကြတာပါ…. မန္တလေးတိုင်း ရမည်းသင်းမြို့နယ် ပျားစည်ရွာက […]
ယုနျလေး ကို ရငျဘတျ ပိုကယျြ စခေငျြတဲ့ မောငျမောငျအေး
ယုနျလေး ကို ရငျဘတျ ပိုကယျြ စခေငျြတဲ့ မောငျမောငျအေး “ယုနျလေး ရဲ့ Music Video တကျလာတော့ ပှဲဆူတော့မယျ ဆိုတာ ခကျြခငျြး သိလိုကျပါတယျ။ ကနြျောလညျး ဒီ Music Video ကို မကွိုကျပါဘူး။ ရညျရှယျခကျြ ရှိရှိ မှားတာ ဟုတျ၊ […]
အံ့သြဂုဏ်ယူစရာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာမြို့တော်ကြီး….
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာအထွန်းကားဆုံးနိုင်ငံပါ….လက်ညှိုးထိုးမလွဲတဲ့ ဘုရားစေတီကျောင်းကန်ဇရပ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အများကြီပါ…. ဒါပေမဲ့ တစ်မြို့လုံး ဗုဒ္ဓဘာသာအထိမ်းအမှတ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ၊ စေတီပုထိုးတွေတော့ မရှိသေးပါဘူး… အဲဒီလိုရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာမြို့ကြီးတစ်မြို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မဟုတ်ဘဲ တခြားနိုင်ငံတစ်ခုမှာ ရှိတယ်ဆိုရင် ပရိသတ်ကြီးတို့ အံ့သြသွားမလား….ဟုတ်ပါတယ်… ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အံ့သြဖွယ်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာမြို့တော်ကြီးက […]
၇ရကျသားသမီးတှကေိုဆေးကုခ မယူခဲ့ အခမဲ့ဆေးကုပေးနတေဲ့ သရုပျဆောငျထူးခနျ့ကြျော (ရုပျသံ)
ရုပျရှငျပညာကို စိနျတောငျကွီးပုံပေးလညျး မရိုကျဘူးလို့ပွောလိုကျတဲ့ ထူးခနျ့ကြျော ”ရုပျရှငျကို စှနျ့လှတျဖွဈဖို့မြားတယျ၊ အခုလို ဆေးကုတဲ့အကွောငျးတရားနဲ့ ဒှနျတှဲ လာရငျ ရုပျရှငျကို စှနျ့လှတျမှာ။ ဘုရားမတညျခငျ အတိုငျးအတာအထိကတော့ မညျသို့သော ရုပျရှငျရိုကျကူးရေးလာလာ လုံးဝလကျမခံဘူး။ ကြိနျးသတေယျ။ ရုပျရှငျပညာနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ စိနျတောငျကွီးပုံပေးလညျး အကို မရိုကျဘူး” Unicode ရုပျရှငျပညာကို စိနျတောငျကွီးပုံပေးလညျး […]
ခန္ဓာကိုယ်ကနေ သင်းပျံ့တဲ့ ရနံ့တွေထွက်နေတဲ့ ဆရာတော် 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
ကျေးဇူးတော်ရှင် ကုံလုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ ဖူးမြော်ရသူတွေ သိကြမှာပါ..အင်မတန် မွှေးပျံ့တဲ့ ရနံ့တွေ ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ထွက်ရှိတာပါ….. အဲဒီလိုပဲ ကုံလုံဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကလို မွှေးပျံ့တဲ့ ရနံ့တွေ ထွက်နေတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးကို ဖူးမြော်ခဲ့ရသူတစ်ဦးက ခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်… တောင်ကြီးမြို့မှာရှိတဲ့ ကုံလုံဆရာတော်ကြီးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကလို မွှေးပျံ့တဲ့ ရနံ့တွေ ထွက်နေတဲ့ […]
တစ်သက်လုံး ဂျင်းမိလာတာ ခုမှဘဲ သိတော့တယ် စိတ်ထဲမှာ
တစ်သက်လုံး ဂျင်းမိလာတာ ခုမှဘဲ သိတော့တယ် စိတ်ထဲမှာ ကျောက်ပွင့်တွေကို သန္တာကျောက်တန်းတွေက ရတဲ့ပင်လယ်စာထင်ပြီး စားနေခဲ့တာ ကျောက်ပွင့် (ခ) ကြွက်နားရွက် မှိုဖြူ သည် ပင်လယ်စာ မဟုတ် ပါ။ ကျောက်ပွင့် ဆိုသော အပင်သည် ကုန်းတွင်းပိုင်းပေါက်ရောက်သော ကြွက်နားရွက် မှိုဖြူ တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည် တရုတ်ပြည်နဲ့ […]
စဈကိုငျးတိုငျး တဈနရော လမျးပျေါမှာ သပိတျတဈလုံးနှငျ့ ဆှမျးခြိုငျ့တဈလုံးခထြားတာတှတေ့ယျ။ဘယျသူမှလညျး မစခေိုငျး၊ ဘာအဖိုးအခမှလညျး မရဘဲ ရဟနျးတဈပါးက သူဆှမျးခံကွှခြိနျမှာ မိုးရနှေငျ့ လမျးတှပွေိုကနြတော ခရီးသှားတှေ အန်တရာယျဖွဈမှာစိုးလို့ဆိုပွီး ပေါကျတူးတဈခြောငျးနှငျ့ လမျးပွငျနလေရေဲ့။ကားပျေါကဆငျးပွီး လြှောကျသငျ့တာလြှောကျ၊ လုပျသငျ့တာလုပျပွီးတော့ “တကာကွီး၊ ဦးဇငျးမကျြနှာပုံနှငျ့ ဘှဲ့ကိုတော့ မတငျနှငျ့နျော၊ သံဃာတျောတှအေားလုံး ဒီလိုလုပျတတျကွပါတယျလို့ပဲ အမှတျသညာပွုကွပါစေ” […]
သူငယျငယျတုနျးက သူ့ဖခငျ မွှကေိုကျလို့ဆုံးပါးခဲ့ပွီး၊ မုဆိုးမမိခငျနှငျ့ မီးမရှိတဲ့ရှာမှာနပွေီးမွနျမာနိုငျငံ သမိုငျးမှာမရှိဘူး‌သေးတဲ့ ဝိဇ်ဇာဘာသာတှဲ၊ ၆ဘာသာဂုဏျထူးရှငျ
မွနျမာနိုငျငံ သမိုငျးမှာမရှိဘူး‌သေးတဲ့ ဝိဇ်ဇာဘာသာတှဲ၊ ၆ဘာသာဂုဏျထူး၊ အမှတျပေါငျး ၅၂၀ နှငျ့ ၂၀၂၀ခုနှဈ တက်ကသိုလျဝငျတနျး​အောငျ ဝိဇ်ဇာဘာသာတှဲ အမှတျအမြားဆုံး Top 1 ကို ခငျြးတိုငျးရငျးသားလေး မောငျဝယေံလငျးကြျော၊ ဧရာဝတီတိုငျး ကွံခငျးမွို့နယျမှ ၁၆မိုငျ​ဝေးတဲ့ ​ရနေံ​တောငျ​ကြေးရှာ ကဆှတျခူးရရှိခဲ့ပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံအတှကျဂုဏျယူစရာဖွဈသလို၊ အထူးသဖွငျ့ ခငျြးလူမြိုးအတှကျ သူရဲကောငျးတဈဦး […]
အင်ျဂလနျနိုငျငံရှိ Sandwich အသားညှပျပေါငျမုနျ့ ပွုလုပျသညျ့စကျရုံလုပျသား ၃၀၀ နီးပါး Covid -19 ကူးစကျခံရ
အင်ျဂလနျနိုငျငံရှိ Sandwich အသားညှပျပေါငျမုနျ့ ပွုလုပျသညျ့စကျရုံလုပျသား ၃၀၀ နီးပါး Covid -19 ကူးစကျခံရ အင်ျဂလနျနိုငျငံ Northampton City မှ Greencore စကျရုံရှိ Marks & Spencer , Sandwich အသားညှပျပေါငျမုနျ့ပွုလုပျကွသညျ့စကျရုံလုပျသား ၂၁၀၀ နီးပါရှိပွီး ထိုအထဲမှ လုပျသားပေါငျး […]